health – OOTDMYANMAR
RELATABLE QUOTES ABOUT STRUGGLING AND WORKING HARD
No Comments on RELATABLE QUOTES ABOUT STRUGGLING AND WORKING HARD
ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားရုန်းကန်နေသူတွေအတွက် ကိုးကားချက် ၅ ခု
At some point in your career you will struggle at work. And some times wise words are needed to uplift the spirits up. Here are some of the quotes we love from these famous personalities and can help.
ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်တွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အဆိုအမိန့်စကားနဲ့ ကိုးကားချက်အချို့က ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝိဉာဉ်ကို ခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် OOTD ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဆိုအမိန့်တွေထဲက ဘဝကို ခွန်အားဖြစ်စေမယ်စကားအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
“ ခက်ခက်ခဲခဲမကြိုးစားပါဘဲနဲ့ ထိပ်ဆုံးရောက်လာတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူး။ ဒါက လိုက်နာရမယ့်နည်းလမ်းပါဘဲ။ ဒီလိုကြိုးစားရတာက အမြဲတမ်းထိပ်ဆုံးကိုမရောက်နိုင်ပေမယ့် အနီးဆုံးကိုတော့ အရောက်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။” – Margaret Thatcher
“I don’t know anything about luck. I’ve never banked on it and I’m afraid of people who do. Luck to me is something else: Hard work—and realizing what is opportunity and what isn’t.” -Lucille Ball
“ကံတရားအကြောင်းကို ကျွန်မ နည်းနည်းမှမသိပါဘူး။ ကံကိုလည်းပုံမအပ်ဖူးသလို အဲ့ဒီလိုပုံအပ်တဲ့လူတွေကိုလည်း ကျွန်မ ကြောက်မိပါတယ်။ ကျွန်မအတွက်တော့ ကံတရားဆိုတာ ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ဆောင်ခြင်း နဲ့ ဘယ်အရာက ကိုယ့်အတွက် အခွင့်အလမ်းဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်နားလည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။” – Lucille Ball
“ရှင်သန်နေထိုင်လာတဲ့သက်တမ်းတလျှောက် ကျွန်မရရှိခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ စစ်မှန်စွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ပယောဂကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ယိမ်းယိုင်မသွားစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အမြင်တွေ၊ ယုတိ္တမတန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ ကြားရပေမယ့် အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာ ကျွန်မရဲ့အင်အားတွေကို မဖြုန်းတီးပစ်ပါဘူး။ ကျွန်မ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ကျွန်မကိုယ်တိုင်သိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။” – Michelle Obama
“Whenever I feel bad, I use that feeling to motivate me to work harder. I only allow myself one day to feel sorry for myself. When I’m not feeling my best I ask myself, ‘What are you gonna do about it?’ I use the negativity to fuel the transformation intoabetter me.” -Beyonce
“ စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံလာတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားပေးပြီး အလုပ်ပိုကြိုးစားဖြစ်တယ်။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ တစ်ရက်ပဲအချိန်ပေးတယ်။ အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးလို့ ခံစားရတဲ့အချိန်တိုင်း “ အဲ့ဒီအတွက် ငါဘာလုပ်မလဲ” လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးဖြစ်တယ်။” အပျက်သဘောတွေကို လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုပြီး ပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားတယ်။” – Beyonce
“ ကိုယ်ချစ်တဲ့အရာကပဲ ကိုယ့်ကိုယ်စစ်မှန်တဲ့ပြီးပြည့်စုံမှုကို ခံစားစေမှာပါ။ ငွေကြေးကို သင့်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ကိုယ်တစ်ကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာတစ်ခုကို မိမိရရဖမ်းဆုပ်ပါ။ လူတွေရဲ့မျက်လုံးက ကိုယ့်ဆီကမခွာနိုင်တော့လောက်အောင်အထိ အကောင်းဆုံးကြိုးစားလိုက်ပါ။” – Maya Angelou
MODEL: Hsu Po Po Tun
OUTFIT: MDS Myanmar
Tags mdsmyanmar, ootdmyanmar, quotes
ACTRESS PHWAY OO: THE PLANT MOMMY TO LOVE
No Comments on ACTRESS PHWAY OO: THE PLANT MOMMY TO LOVE
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Plant Mommy လေး ဖွေးဖွေး
Photo credits @phwayoopsie
That’s why no wonder, Burmese Actress — Phway Oo becomesaplant mommy.
Did you also know that :
Indoor plant တွေက အိမ်တွင်းအလှဆင်ရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကောင်းမွန်တဲ့ခံစားမှုကို ရရှိစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖွေးဖွေး တစ်ယောက် plant mommy ဖြစ်လာတာလဲမဆန်းပါဘူးနော်။
Studies have shown indoor plants: (according to thesill.com)
Boost mood, productivity, concentration and creativity (စိတ်ခံစားမှု၊ ထုတ်လပ်မှုစွမ်းရည်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု နဲ့ ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားတွေမြှင့်တင်ပေးတယ်။)
Reduce stress, fatigue, sore throats and colds (စိတ်ဖိစီးမှု၊ မောပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ လည်ချောင်းနာခြင်းနဲ့ အအေးမိခြင်းတွေကို လျှော့ချပေးတယ်။)
Clean indoor air by absorbing toxins, increasing humidity and producing oxygen (အိမ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကိုစုပ်ယူပြီး လေကိုသန့်စင်ပေးတယ်၊ စိုထိုင်းဆကို မြှင့်ပေးပြီး အောက်ဆီဂျင်တွေ ထုတ်ပေးတယ်။)
Add life toasterile office, give privacy and reduce noise levels (ညည်းငွေ့စရာကောင်းတဲ့ရုံးခန်းတစ်ခုကို အသက်ဝင်သွားစေတယ်၊ အနှောက်အယှက်မရှိဘဲ ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရရှိစေတယ်။ )
Are therapeutic and cheaper thanatherapist (အပင်တွေက ကျန်းမာရေးအတွက် ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်သလို ရောဂါကုထုံးပညာရှင်တွေထက်လဲ ဈေးသက်သာပါတယ်။)
Tags health, ootdmyanmar, phwayoo, plants
CAN PLANTS HELP YOU FEEL SAFE?
No Comments on CAN PLANTS HELP YOU FEEL SAFE?
အပင်တွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားရစေသလား
“There’salot of evidence now about how two hoursaweek inagreen space can lift mood—and then that too has physical, mental, and emotional benefits,” explained Dr. Philippa James of Manchester.
တစ်ပတ်မှာနှစ်နာရီခန့် အစိမ်းရောင်ဧရိယာမှာ (အပင်တွေနဲ့) အချိန်ကုန်ဆုံးခြင်းက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေအတွက် အကျိုးအမြတ်တွေရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်း သက်သေသာဓကတွေ မြောက်များစွာတွေ့ရှိနေပါပြီ လို့ Manchester မှ Dr. Philippa James က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Photo credits @ootdmyanmarstore
There have already been cases in Scotland and Canada (Stating that time spent in the great outdoors has been shown to reduce blood pressure, heart rate, and the stress hormone cortisol, as well as improving measures of psychological health. Hospital patients given views of nature recover faster.) of doctors recommending that patients simply go out into nature to improve their mood and health.
လေကောင်းလေသန့်ရပြီး ကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာမှာ နေထိုင်ခြင်းက သွေးဖိအား၊ နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို လည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆေးရုံမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မြင်ခွင့်၊ ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့ လူနာတွေက ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် နာလန်ထူလာကြကြောင်းကိုလည်း အခိုင်အမာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကော့တလန် နဲ့ ကနေဒါ က ဆရာဝန်တွေက လူနာတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ စိတ်အခြေအနေကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက် အပြင်ထွက်ဖို့ အကြံပေးကြပါတယ်။
After all, as Dr. Ruth Bromley, chair of Manchester Health and Care Commissioning, said, “So much of what keeps people happy and well isn’t medical.”
“ဆေးပညာ မဟုတ်ဘဲ လူတွေကို ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်” Manchester Health and Care Commissioning ရဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Dr. Ruth Bromley က လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Article orignally appeared on cosmopolitan.com and minor revisions were made.
cosmopolitan.com တွင် ဖော်ပြခဲ့သော အကြောင်းအရာကို အနည်းငယ် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
Tags adoptaplant, health, ootdmyanmar, ootdmyanmarstore, plants